Golaha amaanka oo muddo bil ah dib u dhigay dooda ku saabsan qaadida xayiraada hubka Somalia – idalenews.com
Golaha amaanka ee Q/Midoobay ayaa xalay iskugu yimid kulan ka dhacay magaaalada New York ee dalka Maraykanka kaasoo looga hadlay arimaha Soomaaliya iyo sidii loo qaadi lahaa xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya mudada 20-ka sano ka badan.
Raisal wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arimaha dibada ahna Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa shirka intii u socday waxaa lagu falanqeeyey qaabka ugu haboon ee Somalia looga qaadi karo xayiraada hubka ee saaran.
Golaha ammaanka ayaa warbixin ka dhagaystay kaaliyaha xoghayaha guud ee QM u qaabilsan siyaasada oo sheegay in dawlada Soomaaliya aysan habooneyn in xiligan laga qaado xayiraada hubka, waxaana inta uu kulanku socday golaha amaanku isku afgarteen in muddo bil ah dib loo dhigo dooda ku saabsan arintaas.
Xoghayaha guud ee QM Ban ki Moon ayaa dhowaan ugu baaqay golaha amaaanka iney aqbalaan codsi ay soo gudbisay dowlada Somalia oo ahaa in la qaado xayiraada hubka ee saaran si dib loogu dhiso ciidamada dowlada, waxaana baaqaas taageeray dowlada Maraykanka.
Raisal wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibada ahna Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa weydiisatay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay in la kordhiyo xilliga howgalka ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, ka dib hadal ay ka jeedisay kulan uu goluhu yeeshay shalay, iyadoo dhinaca kale ku celisay in la qaado xayiraada hubka.